IFama yeLitye eliqengqelekayo-iNdlu enomtsalane yoo-1930s - I-Airbnb
IFama yeLitye eliqengqelekayo-iNdlu enomtsalane yoo-1930s
Xa iyi-100 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
I-Rolling Stone Farmhouse, ikhaya elinomtsalane le-1930 libuyiselwe ngothando. Ifumaneka ngokufanelekileyo ngaphakathi kweekhilomitha ezili-5 ze-Patuxent River Naval Air Station, kunye neekhilomitha ezi-2 ukuya eSt Mary's College yaseMaryland. Ifakwe kwifama enemibono ebanzi yamasimi kunye namachibi, kunye negadi yamaNgesi esecaleni kweveranda engasemva. Yabucala, izolile, iyaphumla kodwa ngaphakathi kwemizuzu eli-10 yokuthenga kunye neendawo zokutyela. Ngexesha lokuhlala kwakho, indlu kunye neyadi zinikezelwe kuwe kunye neendwendwe zakho.
I-Rolling Stone Farmhouse inekhitshi enkulu, yokutya-ekhitshini kunye negumbi lokuhlala elitofotofo. Ikhitshi le-retro likhulu kwaye lixhotyiswe ngokupheleleyo ngefriji esemgangathweni (akukho menzi womkhenkce/isikhenkcezisi esincinci), isitovu serhasi, kunye nezinto ezininzi zokupheka ezinje ngempahla, izixhobo zokupheka, iblender, kunye nomenzi wekofu. Nceda uqaphele ukuba akukho matshini wokuhlamba izitya. Umgangatho ophezulu we-master suite ubonisa isilingi eveziweyo yokuqala enebhedi enkulu. Igumbi lokuhlala linefenitshala yelizwe ekhululekile kunye ne-43 "TV enentambo esisiseko kunye ne-WiFi. Kukho igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo neliqaqambileyo elineshawari efikelelekayo yokukhubazeka kunye neetawuli ezininzi kunye nezinto zangasese. Kukho amagumbi amabini okulala ezantsi aneebhedi ezimbini, kunye neendawo zokulala zokuxhoma iimpahla. Ke indawo inokwamkela iindwendwe ezi-6: ngokufanelekileyo usapho okanye abahlobo abasondeleyo njengoko kukho igumbi lokuhlambela elinye. Iveranda yangasemva ibonelela ngezihlalo ezilungele ukuselela ikofu yakho yasekuseni okanye iicocktails zangokuhlwa. Indawo enkulu evulekileyo ibonelela ngeendawo zokupaka ezaneleyo. Kukho idesika ngaphandle kwaye kukho indawo entle yokuphumla kunye nokujonga ichibi. Le yifama esebenzayo ukuze kubekho umsebenzi wasesimini/edlelo owenzekayo kunye nokuhamba kwabantu ukuya nokubuya kwizakhiwo ezingaphandle.
I-wifi ekhawulezayo – i-100 Mbps
Ifama ikwindawo ezolileyo, yasemaphandleni. Kukho ithaveni ngaphaya kwesitrato (iGreen Door) ezonwabisayo kwiziselo zesiqhelo kunye nobusuku be-taco/pizza. Siziikhilomitha ezimbini ukusuka kwi-Historic St. Mary's City kunye neKholeji yaseSt Mary's yaseMaryland. Le yimyuziyam enkulu yangaphandle ye-capitol yokuqala yase-Maryland, kunye nekhampasi yaseSt. Sikwakwiikhilomitha ezintlanu ukusuka kwiSikhululo soMoya saseNaval sasePatuxent kunye nemyuziyam yomoya! Ukuthenga kunye neeresityu zimalunga nemizuzu eli-15 kude kwaye iSolomon's Island kukuhamba imizuzu engama-20.
Ndihlala kanye esitratweni kwaye ndihlala ndifumaneka ngefowuni kwisithuba seyure enesiqingatha. Ndihlala ndinonxibelelwano oluncinci kunye neendwendwe ngaphandle kokuba zinemibuzo ethile okanye iinkxalabo endivuyayo ukukunceda ngazo! Ndilawula ipropathi ngokwam kwaye ngamanye amaxesha ndiphuma edolophini. Ndiza kwazisa iindwendwe ukuba andizukubakho edolophini ngexesha lohambo lwazo ukuze ndiqinisekise ukuba banayo yonke into abalindele ukuyifuna ngaphambi kohambo lwabo. Ndikwabonelela ngencwadi yesikhokelo enzulu enengcebiso ezininzi malunga neendawo zokutyela, iibhari, iivenkile kunye nezinto onokuzenza kwindawo leyo kunye nemithetho yendlu kunye nolwazi.
Ndihlala kanye esitratweni kwaye ndihlala ndifumaneka ngefowuni kwisithuba seyure enesiqingatha. Ndihlala ndinonxibelelwano oluncinci kunye neendwendwe ngaphandle kokuba zinemibuzo…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Park Hall